Video: Hooyo guri laga haysto oo arrin aad looga naxo ka hadashay iyo caddaalad-darro ay sheegatay - Hablaha Media Network
Video: Hooyo guri laga haysto oo arrin aad looga naxo ka hadashay iyo caddaalad-darro ay sheegatay
HMN:-Qoys Soomaaliyeed ayaa cabasho ka muujiyay caddaalad darada ay ku dhaqmayaan Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed, Wasiirka amniga gudaha iyo hay’addaha Garsoorka oo masuq maasuq iyo nin jecleysi ay ku eedeeyeen.
Qoyskaan Soomaaliyeed ayaa sheegay in guri aad u weyn oo ku yaal degmada Howlwadaag mudo 27 sano si xoog ah looga haystay, iyagoona sheegay in odaygii guriga lahaa oo lagu magacaabi jiray Cawil Maxamuud Mire lagu dhex dilay guriga sanadkii 1991-kii, reerka haystana ay ka danbeeyeen dilka ninkii guriga lahaa.
Waxay sheegeen qoyskaan Soomaaliyeed in mar walbo oo loo xugmiyo lahaanshaha guriga oo marka reerka haysta laga saari rabo amar kale soo baxa kaasoo ka yimaada badba guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka amniga.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi ayey ku eedeeyeen inuu faragelin ku haayo hay’addii garsoorka oo mar walba go’aamada ay gaaraan farageliyo.
Waxay madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ka codsadeen in caddaalada uu ku baaqay sida ay tahay loo dhaqan geliyo, arrintoodana wax laga qabto.
Arrintaan ayaa fadeexo ku ah dowladda cusub ee Farmaajo hoggaamiyo, taasoo dhowr jeer ku celcelisay in ay la dagaalamayso caddaalad darada iyo masuqmaasuqa.